IntelliCAD - Geofumadas
IntelliCAD CAD software. Alternative CAD
Ihe ozo ohuru nke usoro Bentley Institute: N'ime MicroStation CONNECT Edition
EBentley Institute Press, onye mbipụta akwụkwọ ọgụgụ dị egwu na ọrụ nrụnye aka ọrụ maka ọganihu nke injinia, ụlọ, iwu ụlọ, arụmọrụ, obodo na agụmakwụkwọ, ekwupụtala na enwere usoro akwụkwọ ọhụụ akpọrọ "N'ime MicroStation Jikọọ Edition ", dị ugbu a na mbipụta ebe a na dị ka akwụkwọ ntanetị ...
AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS, Engineering, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Wms2Cad - ijikọ ọrụ wms yana mmemme CAD
Wms2Cad bụ ngwa ọrụ pụrụ iche iji weta ọrụ WMS NA TMS na ịbịaru CAD maka ntụnye. Nke a gụnyere maapụ Google Earth na map OpenStreet na ọrụ onyonyo. Ọ dị mfe, ngwa ngwa ma dị irè. Only na-ahọrọ ụdị nke map site na ndepụta ndị akọwapụtara nke ọrụ WMS ma ọ bụ kọwaa otu nke mmasị gị, ị nwere ike ...
Linux nwere ọhụrụ nwa afọ ngwá ọrụ CAD
N'adịghị ka mpaghara Geospatial ebe ngwa Open Source karịrị nke ndị nwe ya, anyị ahụla sọftụwia na - akwụghị ụgwọ maka CAD ma e wezụga atụmatụ LibreCAD nke ka nwere ogologo ụzọ ịga. Agbanyeghị na Blender bụ ngwa ọrụ siri ike, nghazi ya bụ maka animation ma ọ bụghị CAD etinyere injinịa, ...
LibreCAD, anyị ga-enwe CAD n'efu
Achọrọ m ịmalite site na ịkọwapụta na ọ bụghị otu ihe ịsị CAD n'efu karịa CAD n'efu mana okwu abụọ ahụ dị na ọchụchọ Google na-agakarị na okwu CAD. Dabere na ụdị onye ọrụ, onye ọrụ na-ese ihe osise ga-eche banyere nnweta ya na-enweghị ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ikike ma ọ bụ ọnwụnwa maka paireti na ...
AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, mbụ echiche
Mee ka nchekwa nchekwa nke ụlọ ọrụ nke CivilCAD rụọ ọrụ
Ihe omume ole na ole na-eme nke a, ma ọ dịkarịa ala site na ịdị mfe nke CivilCAD na-eme. Ka anyị hụ otu esi eme ya na CivilCAD, na-eji AutoCAD n'agbanyeghị na ọ na-arụkwa ọrụ na Bricscad nke dị ọnụ ala na ...
FastCAD, ihe nchekwa AutoCAD
Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere FastCAD ... ị kwesịrị. Amaara m, ị nwere ike ịma maka oge mbụ na mmemme a dị, mana achọrọ m iwepụ obere oge site na abalị a nke ice cream na kuki Oreo iji gosipụta ngwa ọrụ anyị nwere ihe anyị ga-amụta na ọbụlagodi na ọ dị na paragraf ikpeazụ. Ihe mere FastCAD ji dị mkpa Ọfọn ...
AutoDesk DGN dwg My mbụ echiche
2011: Ihe ichere: CAD Platforms
Ndewo ndị enyi m, ndị ọzọ, cohetillos, ndị nacatamales na afọ ọhụrụ na-agafe. Ọ dị mma ịlaghachi n'akụkụ a nke ndụ, na afọ dị mma maka akụkọ. AutoCAD na-abịa afọ 3 mgbe ọ tụgharịrị interface na ebe a na-ekwu na nke a nwere ike ịbụ otu afọ ...
AutoCAD 2012 AutoDesk Bentley Systems DGN dwg Emmanuel
Kedu uru software bara na blog a?
Anọ m na-ede banyere isiokwu teknụzụ nzuzu kemgbe ihe karịrị afọ abụọ, na-abụkarị ngwanrọ na ngwa ya. Taa achọrọ m iji ohere mee nyocha nke ihe ọ pụtara ikwu maka ngwanrọ, yana olile anya ịmepụta echiche, na-egosipụta omume ọma na otu ha si emeghachi omume na ego akụ na ụba na okwu mgbasa ozi okporo ụzọ na ...
ArchiCAD, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Google Earth / Maps, GvSIG, IntelliCAD, manifold GIS, Microstation-Bentley, virtual Earth
Ònye kpụrụ m cheese?
Enwere m mmasị na Geoinformatics, ma e wezụga ịbụ magazin nwere oke ụtọ na nhazi, ọdịnaya dị oke mma na ihe gbasara ụwa. Taa ekwuputala ụdị Eprel, nke m si na ya were ụfọdụ ederede gosipụtara na-acha uhie uhie iji kpalie gị ịgụ akwụkwọ ahụ. Na aga na nsụgharị m mere a nyochaa, taa m…
AutoDesk ESRI Google Earth Ezie gvSIG oS Magazines manifold GIS QGIS
Geospatial - GIS, GvSIG, IntelliCAD, manifold GIS, Microstation-Bentley, My egeomates, qgis
QCad, AutoCAD ọzọ maka Linux na Mac
Dị ka anyị si mara, AutoCAD nwere ike ịgba ọsọ na Linux na Wine ma ọ bụ Citrix, mana oge a, m ga-egosi ngwa ọrụ nwere ike ịbụ azịza dị ọnụ ala maka Linux, Windows na Mac. Ọ bụ QCad, ihe ngwọta nke RibbonSoft mepụtara site na 1999 na n'oge a o ruru ntozu oke dika ...
Ngwado nke CAD software
Dị nnọọ ka enwere ntụnyere n'etiti ngwọta kọmputa maka GIS Geographic Information Systems, yana na Wikipedia enwere tebụl yiri ya maka ngwaọrụ CAD gbadoro ụkwụ na ihe anyị maara dịka AEC (Nhazi, Injinịa na Ewu) Enwere ndị nkuzi mahadum, n'ozuzu abaghị uru na ịgwa ụmụ akwụkwọ ha ka ha biputere Wikipedia ...
ProgeCAD, nke ọzọ na AutoCAD
ProgeCAD bụ azịza dị ọnụ ala dabere na teknụzụ IntelliCAD 6.5, nke enwere ike ịnabata n'ụzọ zuru oke dịka ngbanwe nke sọftụwia AutoCAD. Ka anyị hụ ihe progeCAD nwere: Yiri AutoCAD Eziokwu nke ịdị ka AutoCAD ma na iwu na arụmọrụ pụtara na ọ dịghị mkpa ịzụ ...
Inwale Netbook na CAD / GIS
Fewbọchị ole na ole gara aga, echere m ịnwale na Netbook dị otú ahụ na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, na nke a, anọ m na-anwale Acer One nke ụfọdụ ndị ọrụ ime obodo nyere m iwu ịzụta na nleta obodo ahụ. Nnwale ahụ nyeere m aka ikpebi ma m ga-azụta ngwa ahịa ọzọ na HP ọzọ ...
Acer nwewa Bentley Systems blog DGN gvSIG oS manifold GIS
Geospatial - GIS, IntelliCAD, manifold GIS, Microstation-Bentley
Comarison BitCAD - AutoCAD (Gburugburu 1)
Na mbụ ekwuru m banyere BitCAD, nke bụ ụzọ ọzọ dị ọnụ ala na AutoCAD, yana mgbasa ozi na-eme ihe ike ma na ugbu a wepụtara nsụgharị 6.5 ya na arụmọrụ 3D. Kwa ụbọchị, a na-amanye ụlọ ọrụ ndị ọzọ ịhapụ omume hacking n'ihi na nkwekọrịta mba ụwa na-eme ka gọọmentị ndị ọzọ tinye aka na ...
Ọganihu Na - arịwanye Elu nke CAD Integration - Ụgwọ
Mgbe SAICIC nwụsịrị, mmemme Mexico dị iche iche weghaara ahịa a, na-abụ otu n'ime mpaghara injinia emere izizi akpaaka. Echetara m na oge ụfọdụ m kuziri nkuzi ego ahụ, ọ dịkwa mkpa ịnwale ngwa dị iche (dị n'oge ahụ), dịka NewWall, Opus, Champion na Neodata. Nke a yiri m ...
AutoDesk Bentley Systems obodo 3D DGN dwg
Ihe okike nke BitCAD
Echere m na mgbasa ozi maka BitCAD, site na IntelliCAD, dị ezigbo mma, nke site n'ụzọ bụ ụzọ ọzọ dị ọnụ ala na AutoCAD dịka m na-ekwu maka oge gara aga mgbe anyị mere nyocha nke usoro a. Ọ na-enye ezigbo nkuzi ngalaba Manifold Marketing hehe. Ma ebe ọ bụ na m masịrị ha, ha ...
CAD / GIS n'etiti ihe ndị dị na Software
Ejiri Free Software Foundation (FSF) na 1985 na ebumnuche nke ịkwalite ojiji, mmepe na nchedo nke ngwanrọ n'okpuru ikikere na-enweghị ikike nke atụmatụ azụmahịa. Site na Gigabriones Amụtala m na FSF kwupụtara ọkwa iri na otu, gụnyere abụọ na ihe gbasara ọnọdụ ụwa: Onye nnọchi anya Google ...
Na-agbanwe faịlụ AutoCAD 2009 gaa na Microstation V8
Enwere m nsogbu site n'aka onye ọrụ aka na-eji Microstation V8, na-achọ ịgụ faịlụ AutoCAD 2008. Otu akụkọ ihe mere eme Usoro izizi nke mbụ bụ Interact CAD, nke Mike Riddle mebere na 70, bụ onye otu n'ime ndị guzobere AutoDesk nke malitere site na otu aha ndọtị maka ...
Usoro Web-GIS nwere ihe ngwanrọ na-emeghe na ArcPy maka ArcGIS Pro
AulaGEO gosipụtara usoro a lekwasịrị anya na mmepe na mmekọrịta nke data gbasara ohere gbasara ntinye nke ịntanetị ....